Taarikada birta ah, Birta aan birta ahayn, Birta biraha - Kunda
Waxaan ku takhasusay soo saarista taarikada birta ah ee u adkeysata xirmooyinka, taarikada birta u adkaysata cimilada, taarikada birta ah ee daawaha ah, taarikada birta ah ee xoogga sare leh, taarikada isku dhafan ee u adkeysata, taarikada taangiyada, taarikada weelka cadaadiska sare leh, iyo taarikada birta ah. Inbadan
BIRTA AAN SHAQAYN
Saxanka birta kaarboon, xaashida birta kaarboon, birta birta birta Carbon birta waa bir bir ah oo ay ku jirto kaarboon ilaa 2.1% miisaan ahaan. Wareegtada qabow ee kaarboonka birta ah ee ka hooseeya 0.2-3mm, Wareegtada kulul ee Carbon dhumucdiisuna tahay 4mm illaa 115mm Q195 (ST33), Q215A 、 Q215B ， Q235A 、 Q235B (SS400) 、 Q235C 、 Q235D ， Q255A ...
Taarikada birta u adkaysata ayaa loola jeedaa alaabada saxanka gaarka ah ee loo adeegsado xaaladaha xirashada meelaha ballaaran. Waqtigaan la joogo, taarikada birta u adkeysata ee sida caadiga ah loo isticmaalo waa taarikada ka sameysan bir bir-karboon caadi ah ama bir-daawaha hoose oo leh adkeyn wanaagsan iyo baaxad leh iyadoo la adeegsanayo alxanka leh qaro qaas ah ...
Birta Cimilada ayaa loo bandhigi karaa jawiga iyada oo aan la rinjiyeyn. Waxay ku bilaabataa miridhku si la mid ah sida birta caadiga ah. Laakiin ugu dhakhsaha badan waxyaabaha isku dhafan ee ku jira ayaa sababa lakab dusha ka ilaaliya oo ah miridhku qaab-dhismeedkiisu fiicanyahay si ay u samaysmaan, oo markaa u xakameeyaan heerka daxalka. Cimilada hawada ayaa soo bandhigaysa wax wanaagsan ...
Saxanka Birta ahaanta leh wuxuu leeyahay dusha sare ee jilicsan, balaastigga sare, adkaanta iyo awoodda farsamo, wuxuuna u adkaystaa daxalka asiidhyada, gaasaska alkaline, xalalka iyo warbaahinta kale. Waa bir dahaaran oo aan sahlaneyn in miridhku dhaco, laakiin gabi ahaanba ma aha miridhku. Saxanka birta ahama waxaa loola jeedaa ...
bar laba jibbaaran birta
bir wareegsan oo bir ah
biraha wareega kaarboonka
bir laba jibbaaran
biibiile wareegsan oo bir ah
biibiile laba jibbaaran
biibiile wareega steel carbon
Saxanka rasaasta wuxuu u baahan yahay inuu ahaado 4 ilaa 5 mm dhumucdiis si looga ilaaliyo shucaaca. Qaybta ugu weyn ee saxanka leedhka waa leedhka, saamigiisu waa culus yahay, cufnaanta ayaa saraysa; Saxanka leedhka waa nooc ka mid ah saxan lagu sameeyo birta riixaysa birta birta ah ee dhalaalaysa ka dib marka ay dhalaasho. Waxay leedahay shaqooyinka ilaalinta shucaaca, corrosio ...
Waxay leedahay iska caabin daxal oo xoog leh, aashitada iyo caabbinta alkali, dhismaha bay'ada u adkaysata aashitada, ilaalinta shucaaca caafimaadka, raajada, ilaalinta shucaaca qolka CT, ka sii darida, dahaarka dhawaqa iyo dhinacyo kale oo badan, waana shey ilaaliya shucaaca oo yara jaban. Caadiga ah ...
Aluminium waa maaddo cad iyo mid fudud, oo loo qaybiyay aluminium iyo aluminium daahir ah. Sababtoo ah waa ductility, waxaana badanaa laga sameeyaa ul, xaashi, qaab suunka ah. Waxaa loo qaybin karaa: saxan aluminium ah, garbad, xarig, tuubbo, iyo ul. Aluminium wuxuu leeyahay sifooyin kala duwan oo aad u wanaagsan, sidaa darteed ...
Alaabta Wararka Nagu saabsan Nala soo xiriir
Waxqabadka, iyo Kalsoonida
Waxaan nahay hay'adda ee warshadaha steel caanka ah ee China.We 100% loo hubiyo in tayada alaabta our. Marka labaad: Waxaan leenahay xarun noo gaar ah oo wax lagu farsameeyo, oo bixin karta adeegga loo habeeyay. Sida foorarka, alxanka, nadiifinta, daaweynta daxalka, Galvanized. La xiriir Takhasusle